Esi rụọ ọrụ mgbidi nke ala plastik-News-Topflor China amachi
Otu esi arụ ọrụ mgbidi nke ala plastik
Echiche:29 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-03-11 Mmalite: Saịtị
Mgbidi n'elu ala plastik (mgbidi mgbidi) nwere ike icho mma mgbidi ahụ, chebe mgbidi ahụ, wdg. Mgbidi dị n'elu plastik bụkwa ihe eji achọ mma nke oghere a na-ahụ anya, na nsonaazụ nrụnye zuru oke. Kedu ihe bụ usoro mgbe ị na-etinye ala plastic PVC? Na-esote, ka Jinsheng gosi gị otu esi arụ ọrụ mgbidi nke ala plastik.
1. Nke mbụ, ọgwụgwọ bụ isi nke mgbidi dị n'elu
1. Ihe mgbakwasị ụkwụ nke mgbidi ahụ kwesịrị ịdị larịị, akọrọ, sie ike, enweghị mmanụ, aja, enweghị mkpokoro, enweghị ọkwa elu, enweghị mgbape, unyi, wdg. (Achachala mgbidi dị ka putty, simenti ọcha na agba agba latex. A ga-eji simenti dochie mgbidi ahụ iji mee ka elu ala dịkwuo elu ma kwalite njikọta)
2. Tupu ịwụnye mgbidi ahụ, a ga-eji sander ma ọ bụ sandpaper mee ka mgbidi na-enweghị mgbidi iji meziwanye mbadamba nke elu ala. A ghaghị ikpochapu mgbidi ahụ na-egbuke egbuke kpamkpam na onye na-ehichapụ ihe mgbochi, a ga-ehichapụkwa mgbidi ahụ. Obere irighiri ihe.
3. Mgbidi mgbidi nke ime mgbidi agba dị nro ma kwụnye ya ozugbo, nke dị mfe iji mee ka peeling. Iji meziwanye ihe owuwu ụlọ ma chekwaa ụgwọ ihe owuwu, a na-eme ndị na-emechi ihu ala na mbadamba mgbidi dị n'elu ndabere nke anaghị emebi mgbidi mbụ. (The n'ọnụ jidere warara na skirting akara arụ ọrụ nke jikọọ mgbidi na n'ala; elu mgbidi liner ma ọ bụ n'elu mgbidi na mpe mpe akwa (esịtidem nkuku) maka triangular ime kwushin n'etiti mgbidi na nkuku nke ala. Ihe bara uru bụ na mgbe emechara ọrụ ahụ Enweghị rework) Nkume yin na yang nke mgbidi mgbidi ahụ kwesịrị ịbụ nke ziri ezi. Uzo a na-achoghi edozi ga-eweta nsogbu. Tupu ịtọgbọ, a ghaghị ịgwọ nkuku ahụ na-enweghị atụ na nkuku, na akụkụ ndị na-adịghị mma ga-eji eriri triangular siri ike maka jupụta na ndozi Mgbe ịtọsịrị ya, ọ kachasị mma ịwụnye nchebe nkuku nkuku iji mee ka akụkụ dị iche iche sikwuo ike iji meziwanye ọdịdị ahụ. Iji
2. Uzo na igbutu nke mgbidi na ala plastik
Nyochaa ebe ahụ, dabere na ụkpụrụ nke mbenata ihe mkpofu, na-atụle oke nke aesthetics, yana iji isi iyi ink dị ka usoro ogologo ma ọ bụ ụkpụrụ akara akara. Bee ihe achọrọ ka ọ dịkwuo mkpa iji bulie uru akụ na ụba.
2. Operation ihe:
1. Onye na-egbu ihe ga-edozi onye raara onwe ya nye.
2. Emebiri mmebi ahụ n’oge njem na njikwa ga - ebipu ya na ihe ntanetị tupu ọ belata.
3. Mgbe ị na-egbutu ala plastik, ị ghaghị ị paya ntị mgbe niile na ntụziaka ya iji zere mgbawa n'oge paving, nke ga-emetụta ọdịdị ahụ. (Dịka ọmụmaatụ, mabulu mabute, ọka osisi na-eitationomi, kapeeti na-eitationomi, akpụkpọ anụ nitationomi, n metalomi ọla, n imomi nka, biko attentionaa ntị na nsonaazụ mbụ mgbe ị gbachara)
4. Maka nchapu nke ọ bụla, a ghaghị inweta data ziri ezi na ebe a na-ewu ihe. Ala plastik nwere ogo nnagide, yabụ ogologo nke kọntaktị mgbidi dị elu bụ 1/2 nke ala plastik na-akpọtụrụ ala (ogologo mgbidi dị elu bụ 10cm, ala a ga-ewepụta 20cm), debe a oke nke 2-3cm maka oghere ọ bụla.
5. Mgbidi mgbidi (n'ime na n'èzí akuku) ịcha atụmatụ:
Nhọrọ 1: 45 ogo n'akuku bevel
(1) Jiri akara triangle 60 iji chọpụta akụkụ wee belata ala plastik. Nweghị ike ime ihe niile ruo na njedebe, ị ga-ahapụ ebe dị anya nke ala 5-10 mm.
(2) A na-apịpịa ala plastik ọzọ n’elu mgbidi ahụ n’akụkụ mgbidi ahụ ma pịajie ya abụọ iji mechie ọnụ ọgụgụ ahụ (1) n’elu. Jiri triangle iri anọ na ise were chọpụta akụkụ ya wee bevel bekee dị ogo iri anọ na ise.
(3) Mpempe akwụkwọ plastik abụọ n’elu mgbidi ahụ nọchiri ma were mkpọda ogo ya dị iri anọ na ise wee pụta iji nweta akara aka nri ogo 45.
Nhọrọ 2: Mgbapu, akụkụ atọ
Buru ụzọ bepụ akụkụ atọ, ma mee obere oghere dị n'etiti etiti azụ azụ triangle ahụ iji kwado ikwe ala plastik ahụ na nkuku mgbidi ahụ. You nweghị ike ime ihe niile ruo na njedebe, ị ga-amalite site na ụgbọelu nke ala ahụ, na-ahapụ ebe dị anya nke 5 mm. Gbanyụọ ala plastik ahụ gabigara na nkuku ogo 45 n'akụkụ abụọ nke nkuku mpụga. Okpomọkụ weld abụọ 45-ogo diagonal edoghi. (Egbula osisi arịlịka ahụ n'akụkụ nkuku, ma kechie ya ozugbo. Na azụ azụ bọọdụ arịlịka ahụ, na nkwụsị nke nkuku mgbidi kwekọrọ na ala, mepee uzo "V" nke gbasara 2/3 omimi nke ihe eji eme ihe.
Njirimara nke roba